महिलाहरुले ग र्ने ह स्त मै थुनका सात रहस्य – Jagaran Nepal
महिलाहरुले ग र्ने ह स्त मै थुनका सात रहस्य
एजेन्सी । महिला र पुरुषले गर्ने ह स्तमै थुनको तौर तरिका फरक हुन्छ । पुरुषको ह स्त मै थुन र महिलाको ह स्तमै थुनमा धेरै कुरा फरक हुन्छन् तर मुख्य गरी सात फरक दुईबीच देखिन्छ ।
१. महिलाहरुले ह स्तमै थुनमा धेरै समय दिनु पर्छ । पुरुषहरुको जति उनीहरुको छिटो हुँदैन । पुरुषहरुले ह स्तमै थुन गरेर वी र्य निकाल्न थोरै समयमै सक्छन भने महिलाका लागि चरम आ नन्द प्राप्त गर्न बढी समय लाग्छ । महि लाहरुकालागि यसो गर्न कम्तिमा २० मिनेट लाग्छ ।
२. पुरुषले हप्तामा कम्तिमा तीन पटक हस्तमैथुन गर्छन । तर १० प्रतिशत महिलाले मात्रै हप्तामा ३ पटक ह स्तमै थुन गर्छन । ३८ प्रतिशतले महिनामा एक पटक गर्छन ।
३. पुरुषले वा थरुममा, एकान्तमा, ओछ्यानमा जहाँ पनि ह स्तमै थुन गर्न सक्छन् । तर महिलाले ह स्तमै थुन गर्न वातावरण एकदमै शान्त, सुन्दर र गो प्य हुनु पर्छ । कुनै पनि किशिमको अ वरोध उत्पन्न भए महिलाहरुले ह स्तमै थुन तत्काल त्यागी दिन्छन् ।
४. पुरुषले ह स्तमै थुन गर्दा निकै बल प्रयोग गर्छन । हात पनि क डा पार्छन् । लिं ग लाई बलियो गरी तलमाथि गर्दै चालमा ल्याउँछन् । तर महिलाले नरम हातले विस्तारै यो नीमा घर्षण गर्छन ।
५. पुरुषहरुले ह स्तमै थुन गर्दा ध्यान लिंगमा मात्रै राख्छन् । तर महिलाहरुले गर्दन, स्तन, पाखुरा र यो नीको लिबियामा पनि मसाज गर्छन । यसो गर्दा पूरै शरिर हस्त मै थुनमा केन्द्रीत हुन्छ ।
६. पुरुषहरुको वी र्य झरेपछि उनीहरु शा न्त हुन्छन् । त्यो नै च रम आनन्द हुन्छ । तर महिलाहरु चरम आ नन्द सधै खोज्दैनन् ।
७. पुरुषहरुलाई एक पटक चर म आनन्दमा वी र्य झर्छ । तर महिलाहरुलाई ह स्तमै थुनको बेला त्यस्ता चरम आनन्द आ इरहन्छन । एक पटक चरम आनन्द आएपछि उनीहरु सि थिल हुँदैनन । पटक पटक चर म आनन्द लिन स क्छन् ।
यौ”न मानव जीवनको अनिवार्य र प्राकृतिक कुरा हो। यसमा एकअर्काप्रति प्रेम, समर्पण र सन्तुष्टिको महत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ। यौ”न स”म्पर्क गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तु’ष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुवैले धेरै मेहनत गरिरहेका हुन सक्छन्।
यौ”न सम्पर्कका दौरान अपनाइको तरीकाले सन्तुष्टि पनि देला। तर, यौ”न सम्पर्क गरेलगत्तै तपाईंको पार्टनर पढ्न बस्नुभयो भने तपाईंलाई कस्तो महसुस होला ? सहवासपछि गरिने यस्तै गल्तीहरु, जुन तपाईंले गल्ती गरेको महसुस नगरे पनि यसले तपाईंको पूरै यौन जीवनलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
सुति हाल्नु :– धेरैजसो जोडीहरु यी समस्याहरुबाट ग्रसित छन्। से”क्सपछि धेरै जोडीहरुको पार्टनर निदाइहाल्ने बानी हुन्छ, जसले गर्दा यौ”न सम्बन्धको मुड नै खराब हुन्छ। सुतिहाल्ने बानीले गर्दा यौ”नका क्रममा अपनाइएका तरीकालाई तपाईंले एक अर्कासँग साट्न पाउनु हुन्न। स’हवासपछिको मुडलाई बुझ्न सक्नु हुनेछैन।
सरसफाइमा लाग्नु :– यौ”न सम्पर्क गनुपूर्व सँगै नुहाउनु निकै लाभदायक मानिन्छ। तर, सहवासपछि हतार गरेर वासरुमतिर लाग्नु गलत हुन्छ। स”हवास गरिरहेका बेला जोडीहरु केही खराब भएको पनि मतलब गर्दैनन्। तर, सकिनेबित्तिकै त्यो सफा गर्नका लागि वासरुमतिर गइहाल्छन्, यो एक तरिकाले ठिकै हो। तर, तपाईंको पार्टनर त्यसपछि पनि से”क्स मुडमा नै हुनसक्ने भएर त्यसलाई लम्ब्याउने चाहना हुनसक्छ। सफा गर्नका लागि हतार गर्दा तपाईंको पार्टनरमा यौ”न सम्पर्कका दौरान केही नराम्रो घटना भयो कि भन्ने सोच आउन सक्ने भएका कारण पार्टनरको यौ”न सम्बन्धको मुड खराब हुनसक्छ।
साथीलाई फोन गर्नु :– धेरैजसो जोडीहरुले गर्ने यो अर्को साधारण गल्ती हो। यो साँचो हो कि स’हवासका बेला कोही पनि आफ्नो फोन उठाउन र कामको कुरा गर्न इच्छुक रहँदैनन्। त्यसकारण यस्तो गफका लागि किन बिहानसम्म नकुर्ने त ? यौ”न सम्बन्धलाई अनुभव गर्ने बेलामा आफ्नो कान र आँखालाई मोबाइलमा केन्द्रित गर्ने हो भने तपाईंको पार्टनरले तपाईं यसमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने सोच्नुहुनेछ, जसले यौ”न सम्पर्कको मुड खराब गर्नसक्छ।
काम वा पढाइमा लाग्नु :– यौ”न सम्बन्धका दौरानमा जोडीले के सोचिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि यकिन भन्न गाह्रै छ। यदि कसैले स’हवासपछि पढ्नका लागि तरखर गर्छ भने त्यो नै उत्तर हुनसक्छ। आफ्नो पार्टनरलाई एक्लै छोडेर आफू पढ्न अथवा बाँकी भएको काम सिध्याउनतिर लाग्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको यौन जीवनमा न’कारात्मक असर पुर्याउँदछ।
छुट्टाछुट्टै सुत्नु :– तपाईंको एक्लै सुत्ने बानी हुनसक्छ। तर, स’हवास गरेको रातमा भने एक्लै नसुत्नुहोस्। यौ”न सम्बन्ध गरिसकेपछि तकिया र सिरक पोको पारेर मस्त निदाउनका लागि पार्टनरलाई एक्लै छोड्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन।
बच्चालाई सँगै सुताउनु :– कसैलाई पनि आफ्नो गोप’नियतामा खलल पुर्याएको मन पर्दैन, चाहे त्यो ठूलो मानिसले होस् वा सानो बच्चाले नै। धेरै आमाहरुको आफ्नो बच्चाहरुलाई एउटै बेडमा सुताउने बानी हुन्छ, जसले तपाईंको पार्टनरलाई रिस उठाउन सक्छ, जसले तपाईंका लागि सह’वासपछि पनि केही नयाँ कुराहरु गरौँ भन्ने सोचिरहेको हुनसक्छ।
कामका बारेमा कुरा गर्नु :– कतिपय यौ”न जोडीहरु सहवासपछि घरायसी समस्याका बारेमा कुरा गर्ने र योजना बनाउने गर्दछन्। साथै कामको तनावका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छन्। यसले यौ”न साथीको मनोविज्ञानमा सकारात्मक अर्थ राख्दैन। त्यसैले तनावयुक्त कुराहरु यस्तो समयमा नगर्नु नै राम्रो हुन्छ।
काठमाडौं । संसारभरी नै एउटा मान्यता छ, महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर पनि धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौ”निक चाहना पनि शब्दमै व्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ ।
-यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग सं’सर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भन्ने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् । –
विवाह नगरेसम्म यौ न स म्प र्क नराख्ने तपाईको विचार छ भने त्यो राम्रो पाटो हो तर तपाईलाई यौ न आन न्द प्राप्त गर्ने बैकल्पिक उपायहरु धेरै छन् । विषेश गरेर कि शोर अवस्थामा यौ न चाहना तिब्र हुँदा ह स्तमै थुन यौ नच्छा शान्त पार्ने एउटा राम्रो विकल्प हो ।
ह स्थमै थु नको थालनी आफ्नो शरीर, त्यसमा पनि वि शेस गरी यौ न अङ्ग सम्बन्धी जाकारी प्राप्त गरेरपछि मात्र गर्नु सहयोगी हुन सक्छ । ह स्त मै थुन बाहेक यो नि, स्त न तथा अन्य यौ न संवेद नशील अंग को मर्द न, घ र्षण अनि च लाउने जस्ता क्रियाकतामा संलग्न हुन सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य नयाँ प्रयोगहरु पनि गर्न सकिन्छ । पुरुष जस्तै महिलाहरु पनि यौ न उत्ते जक दृ श्य, स्प र्श अनि यहाँ सम्म कि परिक ल्पनाले उत्ते जित हुन सक्छन् ।
महिलाहरुले ह स्त मैथु न गर्देनन् भन्नेहरु प्रसस्त रहेका छन, तर महिलाहरुले पनि ह स्त मै थुन गर्छन । एक अध्ययनका अनुसार पुरुषमा ९२ प्रतिशतले ह स्त मै थुन गरेको कुरा बताएका थिए भने महिलाले ६२ प्रति शत मात्र । पछि फेरी गरिएको अध्ययनमा ८२ प्रतिशत महिलाले ह स्त मैथु न गरेको अध्धयनले देखाएको थियो ।
के तपाईंले कहिल्यै कु कुरले स म्भोग गरिरहेको देख्नु भएको छ ? देख्नु भएको छैन भने पनि अब दसैं ताका यस्ता दृष्यहरु छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ । अ सोज र कात्तिक महिनालाई कुकुरहरुका लागि बैं स चढ्ने वा स ह बास गर्ने महिना भनेर भनिन्छ । यो कहानी महाभारत युगदेखि प्रचलित छ । द्रौप दीको विवाह कसरी पाँ च भाइ पाण्डवसँग हुन गयो भनेर यसअघि नै प ढिसक्नु भएको छ । अब जान्नुहोस्, के का रणले कुकुर ज हाँसुकै सम्भोग गरिरहेका भेटिन्छन् भनेर ।
वास्तवमा द्रौपदीका पाँ च पति भएकाले उनले सबैजनासँग सह बास गर्नै पथ्र्यो । तर सबैसँग एकैपटक यस्तो कार्य गर्न सम्भव पनि थिएन । महादेवले बरदान दिँदाखेरि नै उनलाई सम्भोगपछि स्ना न गरेमा पुनः कुमारी अवस्थामै फर्कने अलौकिक गुण पनि दिएका थिए ।
जब पाँच जना पतिमध्ये कुनै पनि भाइ द्रौपदीको श यन कक्षमा हुदा बाहिर ढोकामा खराउ छोडिएका हुन्थे । यसरी खराउ देखेपछि अर्को भाइ खोपिमा पस्दैन थिए । एक दिन माहिला भीम द्रौपदीको श यन कक्षमा विराजमान थिए । सदा झैं भीमले आफ्ना खराउ प्रवेश द्धारमै छोडेर भित्र द्रौपदीसँग प्रेमलि लामा मग्न भइरहेका बेला अचानक सा हिँला भाइ अर्जुन प्रवेश गर्न पुग्छन् । यो क्ष ण द्रौपदी, अर्जुन र भीम तीनै जनाको निम्ति श र्म नाक बन्न पुग्छ । यो कुरालाई लिएर भी म र अर्जुनबीच भ नाभन पनि हुन्छ । भीम महाभारतका अत्यन्त रिसा हा पात्र थिए । उनले अर्जुनसँग ख राउ राख्ने सर्तका बारेमा बहस गर्छन् तर अर्जुन बिन्ति गर्छन् ‘हे भ्रा ता श्री बाहिर हजुरका चरणआशन देखेको भए यस्तो अनर्थ हुने थिएन, क्ष मा चाहन्छु, परन्तू पादुका ढोकामा छैनन् ।’
यो सुनेर सबैजना अलमल्ल पर्दछन् र तिनै जना भीमका खराउ खोज्न बनबिहारमा निस्कन्छन् । निकै पर एउटा कु कुर भीमका खराउसँग खेलिरहेको देखेर क्रो धित बनेकी द्रौपदीले श्रा प दिँदै भनिन्, ‘यस कुकुुरका कारण मैले यौ नक्रि डा गरेको आज अ र्को पतिले देखेर जुन श र्म मैले सहनु प¥यो । सो ही दृष्य दुनियाँले दे खुन् र म जस्तै हि नताबोध र ला जले गुज्रिनु परोस् ।’ त्यस यता कुकुरहरु खुल्लामै यौ न क्रिडा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने क था छ ।
एजेन्सी – एउटा सामान्य मानिसका लागि महिलाहरु कुन समयमा बढी कामुक र से’क्सी देखिन्छन् भन्ने जिज्ञासा सामान्य नैं हो । आज हामी यस कुराको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी से’क्सी हुनेगरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैन ।
त्यो दिन भनेको शनिवारको रात हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफुलाई ‘सिडक्टिव फिल’ गराउन विभिन्न तरीका अपनाउँछन् । उनीहरू शनिवारको रातलाई विशेष बनाउन तातो पानीले नुहाउने, नयाँ कपडा लगाउने र पुश अप ब्रा लगाउन मन पराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र से”क्सी स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २००० महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूमको हल्का स्प्रे स्पेसल फिल गराउन प्रयोग गर्छन् जसले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।
उक्त समयमा महिलाहरुले से”क्सी लुक पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टाइट फिटिङ कपडा लगाउने, शर्ट स्कट र गहना लगाउनले पनि सर्भेका क्रममा भेटिएका छ ।
एजेन्सी – नाभि अर्थात् (नाइटो), कुनै मानिसको अति आकर्षक, कसैको रौँले छोपीएको, कसैको बहिएर निस्किएको या यस्तै यस्तै विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् । यो मानव शरीरको एकदमै दिलचस्प अर्थात् उत्सुकता हुने खालको भाग हो ।
बिश्वोका धेरै बैज्ञानिकहरुको दिमागमा नाभिले धेरै प्रश्न उठाउँने गरेको पाईन्छ । एक पुरुषले यौन सम्पर्कका बेला आफ्नो पार्टनरको नाभिमा सुम्सुमाएर उत्तेजित गराउने पनि गरेको पाईन्छ । साच्चिकै यो हामीलाई एक उत्सुकता पैदा गर्ने खालको मानव
शरीरको एक भाग हो । सायद तपाइँलाई नाइटोका बारेमा यस्ता आश्चर्यजनक र अनौठ कुरा थाहा छैन होला, आउनुहोस् त्यही नाभिमा पाईने अचम्म लाग्दा कुराहरु जानौं ।१) नाइटोमा ६७ प्रकारका जिवाणुहरु पाईन्छन् । यो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा गन्धयुक्त भाग हो ।
२) संसारमा केबल ४ प्रतिशत मानिसहरुको नाइटो बाहिर निस्किएको हुन्छ । बाँकी सबैको नाइटो भित्र पसेको हुन्छ ।३) बाहिर निस्केको नाइटोलाई दोषपूर्ण नाइटो पनि भनिन्छ । नाइटो बाहिर निस्कनुको कारण जन्मिदा डाक्टरले राम्ररी नाइटो नबाँध्नु हो ।
४) महिलाको तुलनामा पुरुषको नाइटोमा धेरै रौं हुन्छ ।५) के तपाइँलाई थाहा छ ? विश्वको सेक्सी महिलामा नाइटो छैन ।६) नाइटो केबल स्तनधारीमा पाईन्छ । अन्डा दिने जनावरमो पाईदैंन ।७) नाइटो राम्रो हुनमा ९ महिना लाग्छ ।८) Tआकारको नाइटो सबैभन्दा बढि कामुक हुन्छ ।
९ ) दुई ब्यक्तिको नाइटो समान हुन सक्दैन । किनकि हरेक ब्यक्तिको शरीरमा फरक फरक जिवाणु पाईन्छ ।१०) महिलाको नाइटो गोप्य हुन्छ । जुन महिलाको नाइटो बीचमा हुन्छ, त्यस महिलाले स्वस्थ बच्चा
नेपालमा फस्टाउँदै पुरुष वे श्या ल यः कति कमाउन पुरूष वे श्या ?
पोखरा । लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री ९नाम परिवर्तन०को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौ नक र्मी उनको सम्प र्कमा हप्तामा ४र५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौ न स म्पर्क पनि हुने गर्छ । धेरैजसो पनि दोहोरीन्छन । अधिकांश महिला उनलाई खोज्दै आउछँहरु भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् ।
आफुलाई पुरुष ‘यौ नक र्मी’ भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मेटाएको मात्र बताए । ‘मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्रायसंग यौ न स म्पर्क हुने गर्छ’ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने–‘कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन ।’ उनको दैनिकी नै फरक छ ।
हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ । समय मिलाएर उनीहरुसंग यौ न सम्प र्क गर्ने गरेको उनले बताए । मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने परिवारका अन्य सदस्य नभएको मौका छोपेर घर अथवा डेरालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ । विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो । यौ न सन्तुष्ट बनाए बापत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार चलाउन तथा विभिन्न खर्च गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ ।
‘फुर्सदै हुदैन, समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ’ मनोजको आडैमा रहेका अर्का पुरुष यौ नक र्मी नवीन गुरुङ ९नाम परिवर्तन०ले भने–‘मोवाइलबाटै सबै कुरा हुन्छ अनि समय मिलाएर होटलतिर गइन्छ ।’ उनीहरु दुवैको सम्पर्कमा धेरैजसो विबाहित महिलाहरु आउने गरेका छन् । ३५÷४० बर्ष उमेरसम्मका महिलाहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएको गरेको उनले बताए ।
करिव तीन बर्षको उनको यात्रामा हालसम्म करिव ४ सय महिलाहरुसंग यौ न स म्प र्क भएको मनोजले दाबी गरे ।‘मैले शुरु गरेको ३ बर्ष बित्नै लाग्यो’ उनले अगाडि रहेको साथीलाई सोध्दै भने–‘४ सय त काटे होलान ।’ अहिले क्षेत्रीको सम्प र्कमा नियमित १५÷२० जना विबाहित महिला छन् । ग्राहकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि बिदेश श्रीमान हुनेका श्रीमति रहेका छन् भने अन्य विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध महिला रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।यौ नक र्मी भन्ने बित्तिकै मनमा महिलाको तस्बिर आउ“छ ।
सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि महिला यौ न क र्मीकै चर्चा हुन्छ । प्रहरी एवं गैरसरकारी संस्थाहµले पनि महिला यौ नक र्मी लाई पक्रने तथा उद्दार गर्ने गर्छन । यो अस्तव्यस्तमा पुरुष यौ नक र्मी भने सहजै तवरले धन्दा सञ्चालन गरीरहेका छन् । उनिहरुलाई प्रहरीको डर पनि छैन अनि अन्य कसैको झ न्झट पनि । पुरुष यौ न क र्मीको रेट पारिश्रमिक भने नभएको मनोजले बताए ।
‘हाम्रो कुनै रेट छैन्’ उनले थपे–‘तर महिनामा ३०-४० हजार जति कमाइन्छ ।’ उनीहरुलाई यौ न सन्तु ष्टि दिए बापत्त कसैले ह प्तामा अनि कोहिले एकरदुई महिनामा पैसा र उपहार दिने गरेको उनको भनाई छ । ‘एक विबाहित महिलालाई यौ न सन्तु ष्टि दिएपछि मैले एक कार समेत उपहार पाँए’ उनले भने–‘यसलाई अब के भन्ने रु यो रेट त होइन नि उपहार हो ।’
अर्का नविनले पनि थपे–‘मैले एक महिलाबाट एक लाखको मोवाइल पाएको छु’ उनले हातको मोवाइल देखाउदै भने–‘यो ६० हजारको मोवाईल पनि एक लाहुरेकी श्रीमतिले दिएकी हुन् ।’ महिलामात्र बे श्या हुदैनन् । यदि हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । आजभोली समाजमा महिलामात्र नभएर पुरुष ‘बेश्या ’हरु बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।
पुरुषहरु पनि वे श्याको रुपमा व्यवसायमा हाम फालेका छन् । तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गोप्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन् । पुरुष यौ नक र्मी संग महिलाहरु नै खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । कुराकानिकै बिचमा आइपुगेका अर्का पु रुष यौ नक र्मी विमल मगर ९नाम परिवर्तन०ले आज भोली पोखरामा यो कुनै नया“ बिषय नै नभएको बताए । ‘यो कुनै नया“ कुरा नै होइन्’ उनले भने–‘हामिलाई खोज्दै आउनेलाई के छाड्ने तनि रु’ उनले उल्टै प्रश्न गरे । उनीहरुको सम्प र्कमा आउनेहरु बढि बिदेशमा श्रीमान हुनेहरु रहेका छन् । कतिपय त यहि पोखरा श्रीमान भएका तर यौ न सन्तुष्टि नपाएर उनीहरुलाई खोज्दै आउने गरेको विमलको भनाई छ ।
संगै विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध विबाहितसहित अविबाहित पनि रहेका छन् । ‘२ बर्षमा हालसम्म दुईरतीन सय युवतीहरुहरुसंग यौ न स म्प र्क राखेको छु’ विमलले भने–‘खै कताबाट हो फोन गर्दै भेटौं भन्छन अनि कुराकानी भएपछि सबै कामकुरो हुन्छ ।’ कतिपयसंग त माया पनि बसेको मनोजले बताए । ‘एउटी अर्काकि बुढिसंग त माया पनि बस्यो, छुट्नै गाह्रो भयो’ उनले थपे–‘मैले भन्दा नि उसले धेरै माया गरी, बल्ल–बल्ल छुटियो त्यतिबेला धेरै नमज्जा लाग्यो ।’ यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केहि जानकारी नभएको बतायो । कास्की प्रहरी प्रमुख एस।पि। शैलेश थापाले पुरुष यौ नक र्मी बारे केहि जानकारी नभएको र ठुलो समस्या पनि नभएको बताए । ‘यस बिषयमा केहि कम्प्लेन पनि आएको आएको छैन’ उनले थपे–‘खासै ठुलो समस्या पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि प्रहरी अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले भने यस्ता खालका घटना पछिका समस्या हरु आउने गरेको बतायो ।श्रीमान अरु महिलासंग हिडेको थाहा पाएपछि श्रीमति पनि त्यस्तै खालका पुरुष खोज्दै हिड्ने गरेको पनि पछिल्लो समयमा पाइएको केन्द्रका हवल्दार हवल्दार टिकामाया के।सीले बताईन ।
‘बिदेशमा श्रीमान भएका कतिपयले धन सम्पत्ति र छोराछोरीको बिच्चली पारी पर पुरुषसंग हिड्ने तथा धेरै महिला एक पुरुषसंग हिड्ने जस्ता समस्याहरु आउने गरेका छन्’ हवल्दार के।सीले भनिन–‘साउन महिनाको २२ गतेसम्म मात्र यस्ता प्रकृतिका ६ वटा केश हाम्रो केन्द्रमा आएका छन् ।’ विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्थाले लागु औषध, एच।आई।भी तथा एड्स लगायतका क्षेत्रमा काम गरे पनि महिला तथा पुरुष यौ नक र्मीको बिषयमा काम गर्ने संघसस्थाहरु भने रहेका छैनन् ।